juillet 2017 - Page 2 sur 75 -
Vono olona mahatsiravina : Vehivavy nozaraina dimy
Nisehoana habibiana tsy roa aman-tany indray tany Vatofotsy Antsirabe, akaikin’ny PMU omaly alahady, tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany maraina tany ho any. Vehivavy iray, niboridana tanteraka no hita faty tany an-toerana, ary olona …Tohiny
Faritra Vakinakaratra : « Mivelona amin’ny fiompiana ny ankamaroan’ny mponina »
Anisan’ny Faritra goavana eto Madagasikra aorian’Analamanga i Vakinakaratra. Noho izay indrindra, nitondra ny heviny sy ny laharam-pahamehany amin’ny fampandrosoana ara-toekarena any an-toerana ny lehiben’ny Faritra Vakinakaratra, Rakotonarivo William. Nambarany fa hampandroso ny toekarena ara-pambolena ny …Tohiny
Ankadikely : Nirefotra ny basy
Nandrenesana poa-basy indroa indray teny Manjaka, kaominina Ankadikely, ny 28 jolay teo. Araka ny fanomezam-baovao, dia tokantrano iray teny an-toerana no notafihina jiolahy miisa fito tsy nisaron-tava ary nirongo basy poleta miisa roa sy zava-maranitra. …Tohiny
Faran’ny herinandro : Olona efatra matin’ny lozam-pifamoivoizana
Maro ny trangana lozam-pifamoivoizana niseho tamin’iny faran’ny herinandro iny, na teto an-drenivohitra na tany amin’ireo faritra ivelan’Antananarivo. Asa na vokatry ny lalana malama, noho ny fisian’ny erika nifafy, na noho ny tsy fitandreman’ireo mpampiasa lalana …Tohiny